के Google सँग तपाइँको सबै ब्याकलिङ्कहरू ट्रयाक गर्न सम्भव छ?
अभ्यास शो को रूप मा, वेबसाइटहरु जो केहि असामान्य एसईओ सलाहकारहरु या तृतीय पक्ष अज्ञात अनुकूलन एजेंसियों को किराया को फैसला गरे, सामान्यतया आफ्नो रैंकिंग ड्रॉप र Google दंड. अनुभवहीन वेबमास्टर्सहरूले सामान्यतया आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई छिटो रेटिङ वृद्धि बढाउँछ र स्प्यामी प्रविधिहरू प्रयोग गरेर लिङ्कहरू निर्माण गर्दछ.
यो पोष्ट अफ-साइट अप्टिमाइजेशनको लागि समर्पित छ जुन यो पेशेवर र अनैतिक रूपमा प्रदान गरिएको छ र यी प्रक्रियाहरूमा ब्याकलिङ्कहरूको भूमिका प्रदान गरिएको छ।. यसबाहेक, हामी छलफल गर्नेछौं कि खराब ब्याकलिङ्कहरू तपाइँको वेबसाइट रेजिना र प्रतिष्ठालाई कसरी असर गर्न सक्छ.
खराब ब्याकलिङ्कहरू कसरी पत्ता लगाउने?
के तपाईंले कहिल्यै सोचेको छ कि राम्रो ब्याकलिङ्कहरू भन्दा फरक ब्याकलिङ्कहरू फरक छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ वेभसाइटको गुणस्तरमा राख्छ जुन उनीहरु मा बस्छन्. कम गुणस्तरको ब्याकलिङ्क सजिलै पत्ता लगाइयो - was kostet etwa ein umzug. तथापि, कहिलेकाँही तपाईंलाई एक वेबसाइट रिसर्च सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ किनकि ब्याकलिङ्कहरूले तपाइँको साइट एसईओलाई नकारात्मक असर पार्छ.
केहि प्रविधिहरू छन् जुन तपाईं उच्च-गुणस्तर र खराब गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू बीचमा भिन्न हुन सक्नुहुन्छ:
वेब स्रोतबाट लिङ्कहरू जुन मात्र ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न सुरु भयो
) जब वेबसाइटमा राखिएको पोष्टहरू अनंकनिन्ङ्ङ र अनुसन्धान डाटाको कमी छ भने यस्तो वेब स्रोतले मात्र अन्य वेबसाइटहरू लिंक गर्न सक्दछ।. यदि वेबसाइटले वर्डप्रेस सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा राखिएको छ र पूर्वनिर्धारित TwentyEleven विषयवस्तु प्रयोग गर्दछ, यो निम्न, प्राधिकृत गुणस्तर साइटको चिन्ह हो जुन तपाईंको पैसा बाहिर पम्प गर्ने उद्देश्यको साथ सिर्जना गरिएको छ।.
अन्य वेबसाइटहरु को टिप्पणिहरु देखि लिंक्स
तपाईंले शायद यो लिंक को लिंक को निर्माण मा ब्लग मा देखेको छ. प्रोग्रामहरू जुन स्वचालित रूपमा ब्याकलिङ्क उत्पन्न हुन्छ अन्य वेबसाइट टिप्पणीहरू पिल गर्नका लागि बोटहरू प्रयोग गर्छन्. यी टिप्पणीहरू प्रायः प्राकृतिक लाग्दछन् किनभने स्वचालित प्रणालीहरू हाम्रा दिनहरूमा बुद्धिमानी हुन्छन्. यी स्प्याम टिप्पणीहरू निजीकृत हुन सक्छ र लेखक नाम पनि समावेश गर्न सकिन्छ. टिप्पणी स्प्याम लिङ्कले तपाइँको लिङ्क प्रोफाइलमा ल्याउन सक्दैन.
लिङ्क लिङ्कहरू जुन कम गुणस्तर, डुप्लिकेट ग्रंथहरू
बाट घटेको छ, सामान्यतया, लिङ्कको उद्देश्यको साथ सिर्जना गरिएका वेब स्रोतहरूसँग सामग्री छ जुन कुनै पनि अर्थ छैन वा बस अन्य वेबसाइटहरूबाट टाँसिएको प्रतिलिपि. केहि धोखाधड़ी लिंक निर्माण एजेन्सीहरु विशेष रूप देखि यिनी विषयहरु को निर्माण को लागि साइटहरु लाई विकसित गर्दछ र प्राप्त भएका लिंक को सम्बन्धित व्यक्ति को रूप मा पारित गर्दछ. सम्भवतः Google ले छोटो अवधि भित्र पत्ता लगाउँदछ र यी वेब स्रोतहरूलाई दण्डको साथमा हिसाब गर्दछ. फलस्वरूप, तपाइँले तपाइँको साइटको लागि अर्को कम गुणस्तरको ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्नुहुनेछ.
तपाईंको कम गुणस्तर ब्याकलिङ्क कसरी ट्रयाक गर्ने?
अघिल्लो खण्डमा, हामी निम्न कम गुणस्तर ब्याकलिङ्क कसरी भेद गर्ने भनेर छलफल गरेका छौं. अब, यो बुरी लिङ्कहरू कसरी असक्षम गर्ने भन्ने विचार गर्ने समय हो जुन स्थान ड्रप र गुगल दण्डबाट बच्नको लागि.
सबै भन्दा सजिलो तरीका वेबसाइटको मालिकसँग सम्पर्क गर्नु भएको छ जहाँ लास लिङ्क राखिएको छ र उसलाई हटाउन सोध्नुहोस्।. सम्भवतः तपाइँले वेबमास्टरहरू सामना गर्नुहुनेछ जुन तपाइँले लिङ्क हटाउनको लागि तिर्न सोध्नुहुन्छ. यस अवस्थामा, Google लिंक असक्षम उपकरणको साथ अवांछित लिंकहरू हटाउन उत्तम विकल्प हुनेछ यदि तिनीहरू म्यानुअल रूपमा हटाउन सकिँदैन.